ဖက်ရှင်တွေအားလုံးဟာ တစ်ဖန်ပြန်လည်ဆန်းသစ်လာတာကို သင်သတိပြုမိကောင်းပြုမိပါလိမ့်မယ်။ ဒီနေ့ခေတ်မှာ ၈၀ နှင့် ၉၀ ခုနှစ်များက ဖက်ရှင်တွေ ပြန်လည်ခေတ်စားလာနေတာကိုလည်း တွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။ တစ်ချို့အောင်မြင်ကျော်ကြားသူတွေဟာ သူတို့ရဲ့ လူမှုကွန်ရက်တွေပေါ်မှာ (သို့) red carpet တွေပေါ်မှာ ဝတ်ဆင်ကြပြီး ပြန်လည်ခေတ်စားလာတဲ့ ဖက်ရှင်အဝတ်အစားတစ်ခုက ခါးမြင့်ဘောင်းဘီတွေဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်းဖက်ရှင်က ခန္ဓာကိုယ်ကို ပေါ်လွင်စေပြီး ခြေထောက်တွေကို ပိုရှည်စေပါတယ်။ သို့ပေမယ့် အပေါ်အင်္ကျီကို ရွေးချယ်တဲ့အခါ...
သင့်အိပ်ခန်းထဲမှာ သုံးထားတဲ့ အရောင်တွေက ရင်းနှီးမှု အငွေ့အသက်ကို ဖန်တီးရာမှာ အထောက်အကူ ဖြစ်စေတဲ့အတွက် အရေးကြီးပါတယ်။ သူတို့က အလင်းရဲ့ပမာဏနှင့် အရည်အသွေးကို လွှမ်းမိုးပြီး အချို့သော ခံစားချက်တွေနဲ့ စိတ်နေစိတ်ထားတွေကို လှုံ့ဆော်ပေးပါတယ်။ Double bedroom ကို ဘယ်အရောင်လေးတွေသုတ်ရင် အဆင်ပြေသလဲ? ကိုယ့်ရဲ့နှစ်ယောက်အိပ်အခန်းလေးကို ဆေးသုတ်ဖို့ အကောင်းဆုံးအရောင်တွေကို စဉ်းစားတဲ့အခါမှာစိတ်ရှည်ဖို့ လိုပါတယ်။ လူတစ်ယောက်ချင်းစီရဲ့ စရိုက်ကို ထင်ဟပ်စေမယ့်...
နက္ခတ်ဗေဒအရ ရာသီခွင်လက္ခဏာတွေဟာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အိပ်ခန်းတွေကို စုစည်းပုံ၊ အလှဆင်ပုံအပါအဝင် ကဏ္ဍများစွာကို လွှမ်းမိုးပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ရာသီခွင်က ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး၊ အကြိုက်၊ အပြုအမှုတွေနှင့် ယုံကြည်မှုတွေကိုလည်း လွှမ်းမိုးပါတယ်။ ဒါဆိုရင် သင့်ရာသီခွင်အရ သင့်အိပ်ခန်းကို ဘယ်လိုအလှဆင်ကြမလဲ? သင့်ရဲ့ရာသီခွင်အရ သင့်အိပ်ခန်းကို အလှဆင်ရတာက အရမ်းရိုးရှင်းပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ သင့်ရဲ့ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးက သင်အဆင်ပြေမယ့် အရာကို ဆုံးဖြတ်ပေးပါလိမ့်မယ်။ ၁။...
အစင်းတွေက အတွင်းပိုင်းအလှဆင်မှုတွေအတွက် classic အဆန်ဆုံး ဒီဇိုင်းတွေထဲက တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အစဉ်အလာအားဖြင့် အစင်းဒီဇိုင်းက ဘယ်နေရာမှာမဆို ကြည့်ကောင်းတာကြောင့် အများစုက အခန်းတိုင်းမှာ သုံးလေ့ရှိကြပါတယ်။ ဒါတွေကို ဘာလို့ အဲ့လောက်သုံးကြတာလဲ? အစင်းတွေက အခန်းကို ပိုကျယ်သွားစေနိုင်တဲ့ အမြင်အာရုံကို ဖန်တီးပေးလိုပါပဲ။ အစင်းဒီဇိုင်းတွေက အမြင်အာရုံမှာ နေရာပိုကျယ်စေတာကြောင့် သင့်အိမ် တန်ဆာဆင်ခြင်းအတွက် အရမ်းကောင်းပါတယ်။ ဒါ့အပြင် သူတို့က စိတ်ဖိစီးမှုနဲ့...
အလှတရားက နာကျင်မှုလို့ တစ်ချို့လူတွေက ပြောကြပါတယ်။ ဟုတ်ပါတယ်။ လူတွေကို ပုံမှန် အသက်ရှုလို့မရစေတဲ့ ကော်လာအမာတွေ၊ ဝတ်ထားတဲ့အချိန်မှာ အမျိုးသမီးတွေကို မကြာခဏ အသက်ရှုရခက်ပြီး မူးမေ့သွားစေတဲ့ ဗစ်တိုးရီးယား ကော့ဆက်အကျပ်တွေ အတိတ်ဖက်ရှင်မှာ ရှိခဲ့ဖူးပါတယ်။ အချိန်အကြာကြီး ဝတ်ဖို့ အရမ်းအန္တရာယ်များတဲ့ အဝတ်အစားအချို့ ယခုထိတိုင် ရှိနေပါသေးတယ်။ ဒီနေ့မှာတော့ ဘယ်အသုံးအဆောင်တွေ၊ အဝတ်အစားတွေ၊ ဖိနပ်တွေက ကျွန်မတို့ကို ကြည့်ကောင်းစေ၊...
စတိုးဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာ အဝတ်အစားဝယ်တဲ့အခါ ကိုယ်နဲ့သင့်တော်မယ့် အဝတ်အစားကို ရွေးချယ်ဝယ်ယူတတ်စေဖို့ နည်းလမ်းကောင်းလေးတွေကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ ၁။ ဘရာတစ်ထည် ဘရာစီယာရွေးချယ်တဲ့အခါ အရွယ်အစားက အရေးအပါဆုံးအရာ ဖြစ်ပေမယ့် ဘယ်လိုတွက်ချက်ရမလဲဆိုတာ လူတိုင်းမသိပါဘူး။ စတိုးဆိုင်ကို မသွားခင် မိခင်အနည်းငယ်အတွင်းမှာ သင်လုပ်နိုင်ပါတယ်။ မတ်တပ်ရပ်ပါ၊ သင့်ရင်အုံ(bust) အောက်ရှိ လုံးပတ်( ဘရာစီယာခါးပတ် တည်ရှိရာနေရာကို)ကိုတိုင်းပါ။ ပြီးနောက် ရင်ဘတ်(chest)ရဲ့လုံးပတ်ကို တိုင်းပါ။ ခန္ဓာကိုယ်ကို ပေကြိုးနဲ့တိုင်းတဲ့အခါ...
ဟန်းမိတ်စစ်စစ် ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ ပျိုလေးတို့အတွက် Granny Square crochet အိတ်ဒီဇိုင်းအိုင်ဒီယာများ
အခုနောက်ပိုင်းမှာ crochet နှင့် သိုးမွေးထိုးအင်္ကျီ၊ အသုံးအဆောင်လေးတွေ အတော်လေးခေတ်စားလာတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ဒါက အတိတ်ကို တောင့်တတဲ့ အရာတစ်ခုအဖြစ် ကျွန်မတို့ သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။ ဇာထိုးပန်းထိုးအလုပ်နဲ့ သိုးမွှေးထိုးခြင်းတို့က အထူးသဖြင့် အိမ်မှာ အချိန်ဖြုန်းချင်တဲ့ အမျိုးသမီးတွေအတွက် ဝါသနာကြီးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အပျင်းလည်းပြေသလို စိတ်ဖိစီးမှုလည်း လျော့စေပါတယ်။ ခုလိုခက်ခဲလှတဲ့ကာလမှာ knitting (သို့) crochet ထိုးခြင်းဖြင့်လည်း အိမ်မှာနေရင်း ငွေရှာနိုင်ပါသေးတယ်။...
အရင်တုန်းက Fashion trends တွေဟာ အမြဲလိုလို တစ်ကျော့ပြန်ပေါ်လာလေ့ရှိပါတယ်။ ဒီဇိုင်နာတွေဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ ဆယ်စုနှစ်တွေတုန်းက ဖန်တီးထားတဲ့ ဖက်ရှင်တွေကနေ ထုတ်နုတ်ပြီး နည်းလမ်းအသစ်ဖြင့် ခေတ်ရေစီးကြောင်းကို အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုကြပါတယ်။ ယနေ့ခေတ်ဖက်ရှင်တွေဟာ တခြားခေတ်တွေရဲ့ အထူးခြားဆုံးသွင်ပြင်အချို့နဲ့ ပေါင်းစပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီမတူကွဲပြားမှုတွေက လူတိုင်းကို သူတို့ကြိုက်နှစ်သက်ရာတစ်ခုကို ရှာတွေဖို့ အခွင့်အရေးပေးပါတယ်။ ၁။ Bob ၁၉၂၀ပြည့်လွန်နှစ်တွေမှာ အမျိုးသမီးအများစုက ယခုအချိန်လိုပဲ သူတို့ရဲ့ဆံပင်ရှည်တွေကို...
သင့်ကောင်လေးရဲ့ အဝတ်ဗီရိုထဲကနေ သင်စိတ်ကြိုက်ဝတ်ဆင်နိုင်သော အဝတ်အစားများ
မိန်းကလေးတိုင်းမှာ တူညီသောပြဿနာတစ်ခုရှိကြပါတယ်။ အဲဒါကတော့ သူတို့ရဲ့ အဝတ်ဗီရိုထဲမှာ ဘယ်လောက်ပဲအဝတ်အစားတွေပြည့်လျှံနေပါစေ သူတို့ကောင်လေးရဲ့ အဝတ်ဗီရိုကို မွှေနှောက်တတ်ကြပါတယ်။ မှန်ပါတယ် သင့်ကောင်လေးရဲ့ အဝတ်ဗီရိုထဲမှာ သင်နဲ့ လိုက်ဖက်တဲ့ ဝတ်စုံတွေရှိနိုင်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် အောက်မှာ မျှဝေပေးမယ့် အဝတ်အစားတစ်ချို့က သင့်ကောင်လေးဗီရိုထဲမှာ မရှိမဖြစ်ရှိနိုင်မယ့် အဝတ်အစားတွေဖြစ်ပါတယ်။ ၁။ Slim-fit shirts သင့်ကောင်လေးရဲ့ စမတ်ကျပြီး သေးငယ်သောရှပ်အင်္ကျီတွေဟာ သူတို့ကိုယ်တိုင်အတွက် ခေတ်ဆန်ကြော့မော့နေပြီး...